Somaliland: Wasaarada Arrimaha Gudaha oo ka jawaabtay Eedo uga yimid Xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Wasaarada Arrimaha Gudaha oo ka jawaabtay Eedo uga yimid Xildhibaano ka...
Wasaarada Arrimaha Gudaha Somaliland ayaa qaar ka mida xildhibaanada Golaha wakiilada Somaliland ku tilmaamtay kuwo ka xun soo qabashada dableydii Dishay Taliyihii Ciidamada Booliiska ee Gobolka Saaxil.
War qoraala oo kasoo baxay Xafiiska Afhayeen Wasaarada arimaha gudaha Somaliland Jamaal Cabdi Muxumed ayaa lagu sheegay inay xildhibaanadaasi ka xumaadeen soo qabashada gacan ku dhiiglayaashaasi.
“Waxaa wax laga xumaado oo laga yakh-yakhsoodo in masuuliyiin xasaanad leh oo dadku aqli iyo aqoonba ku majeeranayaan oo la hiigsanayo inay maanta kaga cataabaan website-yada iyo warbaahinta dalka waxaan looga fadhiyin.Iyagoo ka xun, kana gubnaya qabashadii ragii gacan ku dhiiglayaasha ahaa ee dilay taliyii qaybta berbara kuwaasi oo hadaan ilahay ku guulaynin ciidamada heeganka u ah amaanka dalka ay halkaasi ka bilaabmi lahaa dab ka dhex qarxa beelaha walaalaha ah ee halkaasi wada dega.” ayuu yidhi
Afhayeen wasaarada arrimaha gudaha oo hadalkiisa sii wataa waxaa uu ku hanjabay in ay socoto baadhis islamarkaana ay baadhistaasi soo saari doonto masuuliyiin ka dambeeyay shaqaaqadaas
“Waxaa muuqata oo hubaal ah in baadhista arrintani ay gali doonto rag waaweyn waana hawl socota oo lagu daba jirro ciidamada amaanka ayaana u xilsaaran.Horaa loo yidhi “layligu biyaha kashiisa ku jiruu ka didaa” Xildhibaan Rayte iyo Xildhibaan Balaaki Marka aad aragto sida ay uga naxeen qabashada gacan ku dhiiglayaashaasi ama ay uga xun yihiin iyagoo warbahinta lasoo fadhiistay warkaa dhiilada leh ee caqli galka ahayn loogana fadhiyin in nin xildhibaani uu ku hadlo inay cadaynaysa in ay kamid ahaayeen ragii ka danbeeyey falkaa foosha xumaa ee lagu dilay taliyii qaybta booliiska berbara.”
Xildhibaan Cabdilaahi Balaaki iyo Xildhibaan Ibraahim Jaamac Rayte ayaa wasiirka arrimaha gudaha Somaliland iyo laamaha amaanka ku dhaliiley inay nabadii dalku ku burburtay iyagoo wasiir Warancade-na ugu baaqay inuu is casilo.
Xildhibaanadda Mucaaridka ah